Inkcazo yeMveliso-UkuThengiswa okulandelayo
Ukuwisa yenye yeemodeli zeshishini ezithandwayo kwezi ntsuku. Izinzile njengomsebenzi obalulekileyo notyalo-mali olusezantsi kunye nokuguquguquka. INextsChain ngomnye umboneleli weshishini onjalo, osebenza njengeqonga elifanelekileyo lokumisela ishishini lakho lokurhuqa simahla kwihlabathi liphela.
INextschain ikhethe amawaka abathengisi abaPhezulu ababonelela ngemveliso ekumgangatho ophezulu ngokuthengisa ngexabiso elithengiswayo. I-Nextschain ineendidi ezahlukeneyo zabarhwebi abasebenzisa i-Shopify APP, ebenza bakwazi ukukhetha kumawaka eemveliso eziwinayo kwikhathalogu yabo kwaye bayonge kwivenkile yabo.
I-Nextschain sisisombululo esinye se-E-commerce seDropshipping, esivumela abasebenzisi ukuba bajolise kwinxalenye yentengiso kunye nentengiso, njengoko iingcali zabo zilawula uluhlu lweempahla kunye nenkqubo yokuthumela. Emva kokufumana ukuthengisa, into ekufuneka uyenzile kukuhlawula kwaye iNextsChain iya kuyizalisekisa iiodolo zakho kwaye emva koko ithumele iiphakheji yoku-odola ngaphandle isebenzisa iindlela zokuhambisa ngokukhawuleza, kwaye idlulise inombolo yokulandela umkhondo kwiiodolo zakho. Njengokuba kunjalo, iNextsChain inceda abathengisi bethu bonge malunga neepesenti ezingama-80 zexesha lakho.
Ngenxa yokhuphiswano olubanzi, ukwakha igama lebrendi kuye kwavela njengenyathelo elifunekayo kumashishini. NgeNextschain, abasebenzisi banokuprinta ilogo abayithandayo kwibhokisi yokupakisha ukuze babonakale kukhuphiswano. Ngenxa yoko, abathengisi banokwakha ukuthembela ekuhambeni kwexesha kunye nabathengi babo kwaye bonwabele ukuthembeka okukhulu kwabathengi.
INextschain ivele njengenye yezona ntengiso zithembekileyo kwintengiso yehlabathi. Ukhathalelo lwabo lwabathengi lubonelela ngeyona nkonzo ilungileyo emva kokuthengisa. Ukwakha ubukho kwi-Intanethi, yenye yeendlela ezikhawulezayo zokuqalisa ngotyalo-mali olusezantsi. Ngeenkonzo zokuwisa eziphezulu zeNextschain, abasebenzisi banokujonga kumgangatho kunye nomgangatho kunye nokunyusa ishishini labo.
Iincwadana zeNextsChain eziluncedo
Kutheni iNextschain ingcono?